Creative Writing » ကျွန်မ သေသွားခဲ့သော်	8
- Kabyar Phyu Phyu
Posted by Kabyar Phyu Phyu on Mar 18, 2016 in Creative Writing, Think Different | 8 comments
နာရေးသတင်းတစ်ခုကြားတိုင်း ကျွန်မတွေးမိတာက ……
ငါကော ဘယ်နေ့လည်းလို့ အလျင်အမြန်တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်မဘေးနားကသူတွေကော ဘယ်တော့လဲလို့ ထပ်ဆင့်တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်မတို့မသေခင် ဘာတွေချန်ထားပြီး ဘာတွေယူသွားမှာလဲလို့ နောက်ထပ်တွေးမိပါတယ်။
ဒီလိုတွေးပြီးတိုင်း ကျွန်မခံစားရတာက ကျွန်မ မုန်းသောသူ ၊ ကျွန်မ ခွင့်မလွှတ်နိုင်သောသူ၊ ကျွန်မကို တိုက်ခိုက်နေသောသူ၊ ဒုက္ခပေးသောသူ … သူတို့အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်ချင်လာပြီး နောက်တခါ သူတို့နဲ့တွေ့ရင် စိတ်ပါလက်ပါ ပြုံးပြလိုက်မယ်လို့လေ။
ခုချိန်မှာ ကျွန်မသေသွားခဲ့သော် ………
♦ ကျွန်မ သေသွားခဲ့သော် …
တစ်ယောက်သောသူက သူ့အတ္တကို ဆုပ်ကိုင်လို့ အရယ်မျက်လုံး နဲ့ ငိုပေလိမ့်မည်
တစ်ယောက်ကတော့ စာနာထောက်ထားစွာနဲ့ အရှိုက်တစ်ချက်ဖြင့် ငိုလိမ့်မည်
တစ်ယောက်ကတော့ သူပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းအတွက် နောင်တရနေလိမ့်မည်
တစ်ယောက်သောသူကတော့ သူ မပြောလိုက်ရတဲ့ စကားတချို့ကို ရေရွတ်နေပေလိမ့်မည်
တစ်ယောက်ကတော့ သူ့မာနကို ခ၀ါချလို့ ကျွန်မကို ထပ်တွေ့ဖို့ မရေမရာ မျှော်လင့်နေလိမ့်မည်
တစ်ချို့ကတော့ စုပ်တသပ်သပ် .. တစ်ချို့ကလည်း ရင်ထုမနာ .. တစ်ချို့အတွက်တော့ .. ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ။
ကျွန်မ အတ္တတွေက လှောင်ပြောင်နေလိမ့်မည်
ကျွန်မ မာနကတော့ ဦးတည်ရာ ပျောက်နေပေလိမ့်မည်
ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားကတော့ ငြိမ်သက်စွာ ပင့်သက်တစ်ချက် ရှိုက်လိမ့်မည်
ကျွန်မ ဓနကတော့ ပိုင်ရှင်အသစ်နဲ့ မူးနေရော်မည်
ကျွန်မ ဒါန နဲ့ သီလ ကတော့ ကျွန်မကို စောင့်မျှော်နေရှာပြီ။
သူတို့ကြာကြာ မစောင့်ရလေအောင် …
♦ ကျွန်မရဲ့ သေခြင်းတရားအတွက် ..
ဘယ်သူ့ မျက်ရည်စက်မှ မလိုပေဘူး
တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ နောင်တလည်း မလိုဘူး.
မမြဲခြင်းတရား နဲ့ အသိတရား ရဖို့ ဒီနှစ်ခုသာ လိုအပ်တယ်။
♦ ကျွန်မရဲ့ နံရိုးပိုင်ရှင် ကတော့ …
ဘ၀သံသရာ တစ်ကွေ့ကွေ့မှာ ကျွန်မကို ပြန်ဆုံဖို့ မျှော်လင့်ကောင်း မျှော်လင့်နေမှာပါ။
About Kabyar Phyu Phyu
Kabyar Phyu Phyu has written7post in this Website..
View all posts by Kabyar Phyu Phyu →	Blog
Thint Aye Yeik says: ကဗျာဆန်လိုက်တာ
.ဖြူဖြူကျော်သိန်းဆိုထားတဲ့ နာမည် ကျန်နေရစ်မယ် ဆိုတဲ့သီချင်းတော့
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: Good thinking & good writing!!!
Warmly welcome!!! Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ကျွန်မသေသွားရင်.. ကျွန်ထီးတွေကျန်ပါဦးမယ်..။
စိတ်မပူပါဘူး.. ဟီး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 115
Tawwin Pan says: မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ မမကိုလည်း ပြုံးပြဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
(သောကြာနေ့ညနေပိုင်းက တင်ထားတာတွေ့လိုက်တယ်။ အလုပ်တွေရှုပ်နေတာနဲ့ ဒီနေ့မှ ဝင်မန့်လိုက်ရတယ်)
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အနာဂတ်ကိုတွေးပြီး သေမဲ့ကိစ္စတွေ သိပ်မပြောနဲ့
ခင်ဇော် says: ရေးးထားးတာလေးး ကောင်းတယ်..
ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်သေမှတော့ နောက်ပိုင်းး ဘာတွေ ဖစ်မလဲ မတွေးးချင်တော့ဘူးး
ဒီလို မတွေးးဖူးးဘူးး လို့ ပြောတာ…
Ma Ma says: (ကျွန်မရဲ့ သေခြင်းတရားအတွက် .. ဘယ်သူ့ မျက်ရည်စက်မှ မလိုပေဘူး)
ကိုယ့်သေခြင်းတရားအတွက် တပါးသူရဲ့ မျက်ရည်စက်မလိုချင်တာကို ပြောင်းပြန်ပြန်တွေးပြီး………..
တပါးသူရဲ့ သေခြင်းအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ မျက်ရည်စက် မကျအောင် ကိုယ်မသေခင်မှာ အရင်ကြိုးစားရမှာပါလားလို့……………..
naywoon ni says: ကဗျာ ဆရာတစ်​​ယောက်​က​တော့ ​သေခြင်းတရား ဆိုတာ ​လေယာဉ်​ပျံ တစ်​စီးက​နေ ​နောက်​တစ်​စီး ​ပြောင်းစီးပြီး ခရီးဆက်​သလို ဆိုလား
*​မောင်​​ချောနွယ်​ နဲ့တူရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.